सिक्किममा यसपाली पक्कै कमल फुल्नेछः नितिन नवीन - खबरम्यागजिन
Homeखबरसिक्किममा यसपाली पक्कै कमल फुल्नेछः नितिन नवीन
सिक्किममा यसपाली पक्कै कमल फुल्नेछः नितिन नवीन
April 7, 2019 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि खबर, सिक्किम 0
गान्तोक, 07 अप्रेल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का चुनाउ प्रभारी नितिन नविनले योपाली सिक्किममा भाजपाको कमल अवश्य फूल्ने दाबी गरेका छन्। राजधानीमा आइतबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रभारी नविनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
प्रभारी नविनले भने, देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विगत पॉंच वर्ष सिक्किमको विकासको निम्ति गरेका कामहरूका कारण सिक्किमे जनताको भरोसा भाजपामाथि बढ़ेको। भाजपाका उम्मेदवारहरूप्रति जनसमर्थन बढ्दो छ। यसकारण हामीलाई पूर्ण विश्वास छ योपाली सिक्किममा भाजपाका कमल अवश्य फूल्नेछ।
अर्कातिर प्रभारी नविनले मुख्यमन्त्री पवन चामलिङका बयानहरू विरूद्ध कड़ा प्रतिक्रिया गरे। उनले प्रश्न गर्दै भने, मुख्यमन्त्रीले कसलाई सिक्किमको दुश्मन भनिरहेका छन्? राज्यको विकासको निम्ति एक लाख करोड़ रूपियॉं दिने सिक्किमको दुश्मन हो कि राज्यका जनताको निम्ति भनेर पठाइएको पैसा काठमाण्डौंको केसिनोमा लगानी गर्ने सिक्किमको दुश्मन हो?
मुख्यमन्त्री चामलिङले आफ्नो एक जनसम्बोधनमा अब उनको नयॉं अवतार देख्नेछ भनी दिएको वक्तव्यप्रति पनि उनले प्रतिक्रिया गरे। प्रभारी नविनले भने, मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो नयॉं अवतार देखाउने आवश्यकता किन पऱ्यो? के चौकीदारको डरका कारणले हो? मुख्यमन्त्रीको भ्रष्ट अनुहार सबैले देखिसकेको बताउॅंदै आवश्यकता परेको खण्डमा सीबीआई जॉंच गरेर एक—एक पैसाको हिसाब लिने उनले चुनौती दिए।
सिक्किममा सीबीआईको प्रवेशमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे बोल्दै उनले भने, भ्रष्टाचारमुक्त सिक्किमको कुरा गर्छ भने सीबीआईसित किन डराउनु? मुख्यमन्त्री चामलिङले हालैमा एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै एसकेएम अध्यक्ष पीएस गोले तस्करीमा संलग्न रहेको र यसको प्रमाण आफुसित रहेको दाबी गरेका थिए भन्दै यदि गोले तस्करीमा संलग्न छन् भने किन उनी विरूद्ध कार्यवाही गरिएन भनी उनले प्रश्न गरे।
उनले भने, मुख्यमन्त्री र गोलेबीच कस्तो समझौताअन्तर्गत कार्यवाही गरिएन? कार्यवाही नगर्नुले उनी दुवै मिलेका छन् भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ। मुख्यमन्त्रीले भ्रमक कुराहरू गरेर जनतालाई अलमल्याउने काम गरिरहेको उनले आरोप लगाए।
‘भाजपा गोर्खालाई मेची तार्ने ताकमा छ’
चुनाउमा चामलिङको चिया चर्चा